toerana mifampiresaka sy Fiarahana
Farany, ny top nahazo ny Mampiaraka toerana, izay dia ny»kintana Internet»tamin’ny -ies
tapitrisa famangiana fanaony isam-bolana
Ny tena hizara ny mpitsidika — mpampiasa avy any Frantsa, arahin’ny Alemaina, Belarosia, Kazakhstan ary ny Isiraely (kely latsaky ny amin’ny firenena tsirairay).
toa tahaka ny hoe»Internet star»noho ny tamin’ny taon-dasa indray,»lasa star»! Manakaiky ny hampitombo ny fitsidihana avy any Frantsa tamin’ny septambra taona. Tanteraka ny Mampiaraka toerana am-polony tapitrisa ny famangiana fanaony isam-bolana.
Ny tetikasa vohikala, mitsangana ao amin’ny fiandohana ny Fiarahana amin’ny aterineto.
Natomboky ny Fiarahana amin’ny tranonkala dia tamin’ny taona, ary mbola velona
Izany no ao amin’io»hanorina fifandraisana»dia nampidirina ireo»chips», izay efa ho ny rehetra Mampiaraka toerana: ny fitaizana ny mombamomba azy ao an-tampon-pikarohana, izay fikarohana noho ny manokana masontsivana ny mombamomba azy ireo, eo ambanin’ny»Vahiny», virtoaly fanomezam-pahasoavana sy ny maro hafa.
Ny Mampiaraka toerana efa nametraka ny tenany ho toy ny toetra sy ny fitaovana azo antoka ho famatorana ny Fiarahana sy ny fifandraisana samy hafa amin’ny maha — samy lehibe sy ny»indray».
Azo lazaina fa Mampiaraka toerana maimaim-poana? Amin ny fitsipika, Eny: tena miasa (fisoratana anarana, hanangana sy hanova ny mombamomba, fikarohana, fanoratana hafatra) tsy mitaky ny mpampiasa ny fandaniana ny vola. Ny hafa rehetra ny safidy, ny fanomezana»soa», na VIP sata, ny fitaizana ny mombamomba, mametraka ny»Mpitondra»ny lalao»Mpitarika»ho an’ny ny vola.
«Tranonkala niady hevitra sy ny Fiarahana amin’ny»mendrika tsara tolo-kevitra, fara fahakeliny, izany no fomba iray amin’ireo lehibe indrindra ny Fiarahana sy ny toerana an-tserasera sy ho ohatra ho ela velona any ny Tambajotra, izay midika fa ny asa fanompoana dia nitsangana ny fitsapana ny fotoana
← Dokam-barotra kely ny fiarahana amin'ny olon-dehibe maimaim-poana amin'ny aterineto
Rupert amin'ny Aterineto - Chatroulette - Tits, Dicks sy ny Pelaka →